News - Qaab dhismeedka shaashadda taabashada capacitive
Qaab dhismeedka shaashadda taabashada capacitive
qaabdhismeedka aasaasiga ah
Qaab dhismeedka aasaasiga ah ee shaashadda taabashada capacitive-ka waa: substrate-ka waa hal-lakab plexiglass ah, lakabka filimka hufnaanta hufan ayaa si isku mid ah loogu been abuurtay dusha iyo dusha sare ee plexiglass-ka, iyo koor cidhiidhi ah oo dhaadheer ayaa la dhigayaa afarta gees filimka hufnaanta hufan ee dusha sare. koronto. Mabda 'u shaqeynteedu waa: marka farta taabato shaashadda taabashada capacitive-ka, aallad heer sare ah ayaa ku xiran dusha shaqada. Waqtigaan, farta iyo dusha shaqada ee shaashadda taabashada waxay sameysmayaan xiraye isku xira, taas oo u dhiganta koronto-qabe, maxaa yeelay waxaa dusha sare ka shaqeynaya calaamadda-soo-noqnoqodka sare. Xilli yar ayaa lagu sawiraa barta taabashada. Xilligan yar wuxuu ka socdaa korontooyinka afarta gees ee shaashadda taabashada. Xilliga hadda maraya afarta koronto wuxuu u dhigmaa masaafada toosan ee farta iyo afarta gees. Xisaabinta, qiimaha isuduwaha barta xiriirka ayaa la heli karaa.
Shaashadda taabashada capacitive-ka ah waxaa si fudud loogu eegi karaa shaashad ka kooban afar lakab oo ah shaashado isku dhafan: lakabka ugu sarreeya waa lakab muraayad difaaca ah, oo ay ku xigto lakabka tabinta, lakabka saddexaad waa shaashad muraayad aan tabin ahayn, iyo lakabka afraad ee ugu hooseeya Sidoo kale waa lakab tabinta. Lakabka ugu hooseeya ee tabinta waa lakabka gaashaanka, kaas oo ciyaara doorka kahortaga calaamadaha korantada gudaha. Lakabka tabinta dhexe waa qaybta muhiimka ah ee shaashadda taabashada oo dhan. Waxaa jira tilmaamo toos ah afarta gees ama dhinac si loo ogaado booska barta taabashada.
Qaab dhismeedka shaashadda taabashada taabashada ah ayaa badiyaa lagu dhajiyaa lakabka jirka ee filim daahfuran oo ku yaal shaashadda muraayadda, ka dibna ku dar muraayad difaac ah oo ka baxsan lakabka qadka Naqshadda muraayadda laba-geesoodka ahi waxay si buuxda u ilaalin kartaa lakabka kaaraha iyo dareeraha, isla mar ahaantaana, gudbinta iftiinka ayaa ka sarreeya. Si ka wanaagsan ayuu u taageeri karaa taabashada badan.
Shaashadda taabashada capacitive-ka waxaa lagu dhejiyay elektaroodyo dhaadheer oo cidhiidhi ah dhammaan afarta dhinac ee shaashadda taabashada si ay u sameysato garoon koronto yar oo AC ah oo ku jira jirka tabinta. Markaad taabato shaashadda, aagga korontada ee jirka bini'aadamka awgood, faraha iyo lakabka kaaraha ayaa xumaan doona.
Shaashad taabasho karti leh
Kaaliyaha isku xiraha ah, kan ay sii daayaan afarta dhinac ee koronto wuxuu u qulquli doonaa xiriirka, awoodda hadda jirtaana waa mid si aan toos aheyn ugu dhiganta masaafada u dhexeysa farta iyo korantada. Kontaroolaha ku yaal shaashadda taabashada kadib wuxuu xisaabin doonaa saamiga iyo xoogga hadda si uu si sax ah u xisaabiyo goobta barta taabashada. Labada muraayad ee shaashadda taabashada capacitive ma aha oo kaliya inay ilaaliso qalabka iyo dareemayaasha, laakiin sidoo kale waxay ka hortageysaa arrimaha deegaanka ee dibadda inay saameyn ku yeeshaan shaashadda taabashada. Xitaa haddii shaashaddu wasakh tahay, boodh ama wasakhda saliidda, shaashadda taabashada awoodda ayaa wali si sax ah u xisaabin karta booska taabashada.